Shiinaha YASKAWA robot alxanka Automatic AR1440 warshad iyo soo saarayaasha | Jiesheng
Robotka Alxanka otomaatiga ah Sharax
Robot alxanka otomaatig ah AR1440, oo leh saxnaan sare, xawaare sare, shaqeyn firidhsan, 24 saacadood oo hawlgal joogto ah, oo ku habboon alxanka birta, birta aan lahayn, xaashida galvanized, aluminium iyo waxyaabo kale, oo si ballaaran loogu isticmaalo qaybo kala duwan oo gawaarida ah, Biraha Qalabka, qalabka jirdhiska, mashiinnada injineernimada iyo mashaariic kale oo alxanka ah. ,
Robotka si otomaatig ah u shaqeeya MOTOMAN-AR1440 wuxuu leeyahay culeyska ugu badan ee 12Kg iyo ugu badnaan 1440mm. Isticmaalkiisa ugu weyni waa alxanka qaansada, farsamaynta leysarka, maaraynta, iyo kuwa kale. Xawaareheeda ugu sarreeya wuxuu ilaa 15% ka sarreeyaa moodooyinka jira!
Faahfaahinta Farsamada ee Robotka Alxanka otomaatiga ah :
130Kg 1.5kVA 260 ° / seken 230 ° / seken
260 ° / seken 470 ° / seken 470 ° / seken 700 ° / seken
Waad u dhisi kartaa xarun robot alxanka loogu talagalay alxanka qaybaha dhaadheer (qaybaha qiiqa, iwm.). Iyadoo loo marayo isku darka labada Yaskawa rootiyo MOTOMAN iyo MOTOPOS booska alxanka, alxanka iskudhafan ee fallaadho duplex la samayn karaa. Alxanka tayo sare leh oo wax soo saar sare leh ayaa la gaari karaa xitaa marka alxanka qaybaha dheer.
Waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa alxanka qaybta hufan adoo adeegsanaya falalka isku dubaridan ee 3 aalado Yaskawa MOTOMAN ah. Laba aalado gacanta wax ka qabta ayaa gacanta ku haya qalabka shaqada waxayna u dhaqaaqaan booska alxanka ugu habboon. Meesha ugu haboon ee alxanka, si loo hubiyo tayada alxanka xasiloon. Ka dib markii alxanka la dhammeeyo, robotku wuxuu si toos ah u fuliyaa hawlgalka maaraynta, taas oo fududeyn karta qalabka wax lagu qabto.
Hore: Robot alxanka YASKAWA laser MOTOMAN-AR900
Xiga: Yaskawa aaladda alxanka qallalan AR2010
Qabashada Gacanta Robot, Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, 6 Axis Qabashada Robot, Robotka Gacanta otomaatiga ah, Aaladda otomaatiga ah ee Robot,